ပုဏ္ဏားကျွန်းတိုက်ပွဲ အေအေ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အကျအဆုံး များစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေး...! - Thadin
[ May 22, 2019 ] ကလေးက ည ၂ နာရီလောက်မှာ ရုတ်တရက်ထထိုင်ပီးတော့ ကယောင်ကတမ်းတွေပြောနေလို့ဆိုပီး ဆေးရုံရောက်လာတယ်…! NEWS
[ May 22, 2019 ] အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း အိုဘားမားက သမီးတွေကို သင်ပေးတဲ့ ချက်ခြင်းရပ်တန့်လိုက်ရမယ့်အချက်များတဲ့ (အရမ်းကြ်ုက်လ်ု့ ကူးယူ​ဖော်​ပြပါတယ်​ ) KNOWLEDGE
[ May 22, 2019 ] မီးဖြတ်ချိန်မဟုတ်ဘဲ ပြတ်တောက်၍ လွှတ်တော်အမတ်က လျှပ်စစ်ဒုဝန်ကြီးထံ တိုက်ရိုက်တိုင်ကြား…! NEWS
[ May 22, 2019 ] အိမ်စောင့်နတ် တကယ် ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြေကြားပုံ…! KNOWLEDGE
[ May 22, 2019 ] အသည်းကင်ဆာ နောက်ဆုံးအဆင့်လူနာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့ ဆေးနည်း…! HEALTHY
HomeNEWSပုဏ္ဏားကျွန်းတိုက်ပွဲ အေအေ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အကျအဆုံး များစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေး…!
ပုဏ္ဏားကျွန်းတိုက်ပွဲ အေအေ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အကျအဆုံး များစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေး…!
March 16, 2019 Admin Kwee NEWS Comments Off on ပုဏ္ဏားကျွန်းတိုက်ပွဲ အေအေ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အကျအဆုံး များစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေး…!
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နှင့် ကျောက်တော်မြို့ ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသော လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွား၊ သောင်းကျန်းသူများ အကျအဆုံး များစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေး
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက် ည ၉ နာရီခန့်တွင် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ၊ ပိန္နဲတောကျေးရွာ အနီးသို့ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့မှ အောင်ဇော်လင်းနှင့် အဖွဲ့(၁)ဖွဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံသို့ ၎င်းတို့၏အမာခံများ စေလွှတ်ကာ
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များမှ စုပေါင်း၍ စုစုပေါင်း ငွေကျပ်သိန်း ၆၅ဝ အား ၇ ရက်အတွင်းပေးရန်နှင့် ပေးဆောင်မှုမရှိပါက တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ပြီးဆုံးချိန်၌ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ အပါအဝင် နယ်မြေခံ တပ်ရင်းဌာနချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းများအား ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်စာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ လက်နက်အားကိုးဖြင့် အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုအပေါ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအားလုံးက မခံမရပ်နိုင်ဘဲ တပ်မတော်နှင့် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများအား အချိန်မီ သတင်းပေးပို့ လာသကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့သို့လည်း လုံးဝမပေးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ သတင်းဆက်အရ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် အနီးပတ်ဝန်းကျင် တစ်ဝိုက်အား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နယ်မြေလုံခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဖြန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများသည် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာစစ်ဌာန၏ မေးခွန်းလွှာနှင့် အဖြေလွှာများအား ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်
နယ်မြေလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား (၁၁)ဦးခန့်သာ ရှိသည့် ယိုးတရုတ်ကျေးရွာ ရဲကင်းစခန်းအား မတ် ၉ ရက်ညပိုင်းတွင် အင်အားအလုံးအရင်း ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီး နယ်မြေဒေသလုံခြုံရေးအား စတင်နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး လာခဲ့သည်။
ဒေသခံပြည်သူများက ပေးပို့သော သတင်းနှင့် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ၏ ယိုးတရုတ်ရဲကင်းစခန်းအား ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်လာမှုများကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများအား တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ယင်းသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် မတ် ၁ဝ ရက်၌ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ကန်ဇောက်ကျေးရွာ အနီးတစ်ဝိုက် ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာများ လုံခြုံရေးတပ်စခန်းများအား AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့များမှ ထပ်မံနှောင့်ယှက် တိုက်ခိုက်မည်ဟု သတင်းရရှိသဖြင့်
ကျောက်တော်မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသော တပ်မတော်စစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းအား ကန်ဇောက်နှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်း အကြားရွှေ့ပြောင်း၍ နယ်မြေစိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မတ် ၁၁ ရက်နေ့လည်ပိုင်းတွင် ကျောက်တော်မြို့၊ ကန်ဇောက်ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက် မီတာ ၇ဝဝဝ ခန့်အကွာသို့ အရောက်၌
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်တို့အား ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်၊ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် အင်အားစုစည်းလျက်ရှိသော AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့မှ အင်အားစုများနှင့် နယ်မြေခံကျေးရွာအလိုက် ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသည့် အရပ်သားများအား လက်နက်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ စုစည်းထားသည့် အင်အားစုများပါ ပူးပေါင်းထားသော ယာယီအခြေပြုစခန်းအား တွေ့ရှိပြီး စတင်ထိတွေ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်လျက်ရှိစဉ် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများသည် မတ် ၁၂ ရက်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ တိုက်ခိုက်ခြင်းများ ၊ အကြိမ်ကြိမ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်း၍ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အပြီးသတ်ချေမှုန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
မတ် ၁၃ ရက်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အင်အားဖြည့်တင်းရန် သွားရောက်ခဲ့သော တပ်မတော်စစ်ကြောင်း တစ်ကြောင်းကိုလည်း ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အပြီးသတ် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ရေးအတွက် အကြိမ်ကြိမ် နေ့ညဝိုင်းပတ် ပိတ်ဆို့လုံးထွေးတိုက်ခိုက်ရန် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ရာ မိမိတပ်များက ရွပ်ရွပ်ချွံချွံပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။
မတ် ၁၃ ရက် ညပိုင်းနှင့် မတ် ၁၄ ရက်တို့တွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ကူ၊ပစ်အားရယူလျက် မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ချေမှုန်းရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည့် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အား ဟန်ချက်ညီ ပြင်းထန်စွာ တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာ ဟန်ချက်ညီ တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုများကြောင့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့များသည် မတ် ၁၄ ရက် ညနေပိုင်းတွင် အကျအဆုံးများစွာဖြင့် အရပ်မျက်နှာအသီးသီးသို့ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေး သွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်တွင် မိမိဘက်မှ အရာရှိ၊စစ်သည်အချို့ ကျဆုံးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများထံမှ လက်နက်၊အလောင်းနှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် အတွင်း မြို့၊ ရွာနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများအား တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ယာယီအခြေပြုစခန်း ၁ ခုတို့အား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက် လုံခြုံရေးအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နှငျ့ ကြောကျတျောမွို့ ပတျဝနျးကငျြလုံခွုံရေး ဆောငျရှကျနသေော လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ AA အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူအဖှဲ့တို့ တိုကျပှဲပွငျးထနျစှာ ဖွဈပှား၊ သောငျးကနျြးသူမြား အကအြဆုံး မြားစှာဖွငျ့ ဆုတျခှာ ထှကျပွေး
၂ဝ၁၉ ခုနှဈ၊ မတျလ ၇ ရကျ ည ၉ နာရီခနျ့တှငျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ၊ ပိန်နဲတောကြေးရှာ အနီးသို့ AA အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူအဖှဲ့မှ အောငျဇျောလငျးနှငျ့ အဖှဲ့(၁)ဖှဲ့ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးမြားထံသို့ ၎င်းငျးတို့၏အမာခံမြား စလှေတျကာ
ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ပျေါ ရပျကှကျမြားမှ စုပေါငျး၍ စုစုပေါငျး ငှကေပျြသိနျး ၆၅ဝ အား ၇ ရကျအတှငျးပေးရနျနှငျ့ ပေးဆောငျမှုမရှိပါက တက်ကသိုလျဝငျ စာမေးပှဲ ပွီးဆုံးခြိနျ၌ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ အပါအဝငျ နယျမွခေံ တပျရငျးဌာနခြုပျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ စခနျးမြားအား ဝငျရောကျတိုကျခိုကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ခွိမျးခွောကျစာ ပေးပို့ခဲ့ကွောငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ သတငျးရရှိသညျ။
ထိုကဲ့သို့ လကျနကျအားကိုးဖွငျ့ အနိုငျကငျြ့စျောကားမှုအပျေါ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျရှိ ဒသေခံတိုငျးရငျးသား ပွညျသူမြားအားလုံးက မခံမရပျနိုငျဘဲ တပျမတျောနှငျ့ လုံခွုံရေး အဖှဲ့အစညျးမြားအား အခြိနျမီ သတငျးပေးပို့ လာသကဲ့သို့ အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူ အဖှဲ့သို့လညျး လုံးဝမပေးနိုငျကွောငျး အကွောငျးပွနျခဲ့ကွပါသညျ။
အဆိုပါ သတငျးဆကျအရ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျနှငျ့ ကြောကျတျောမွို့နယျ အနီးပတျဝနျးကငျြ တဈဝိုကျအား လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက နယျမွလေုံခွုံရေး လုပျငနျးမြား ဖွနျ့ခှဲဆောငျရှကျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ဆောငျရှကျလကျြရှိစဉျ AA အကွမျးဖကျ သောငျးကနျြးသူမြားသညျ ၂ဝ၁၉ ခုနှဈ တက်ကသိုလျဝငျတနျး စာစဈဌာန၏ မေးခှနျးလှာနှငျ့ အဖွလှောမြားအား ထိနျးသိမျးခွငျးလုပျငနျးနှငျ့
နယျမွလေုံခွုံရေး ဆောငျရှကျနသေညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျအငျအား (၁၁)ဦးခနျ့သာ ရှိသညျ့ ယိုးတရုတျကြေးရှာ ရဲကငျးစခနျးအား မတျ ၉ ရကျညပိုငျးတှငျ အငျအားအလုံးအရငျး ဖွငျ့ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျလာခဲ့ပွီး နယျမွဒေသေလုံခွုံရေးအား စတငျနှောငျ့ယှကျဖကျြဆီး လာခဲ့သညျ။
ဒသေခံပွညျသူမြားက ပေးပို့သော သတငျးနှငျ့ AA အကွမျးဖကျ သောငျးကနျြးသူမြား၏ ယိုးတရုတျရဲကငျးစခနျးအား ဝငျရောကျ တိုကျခိုကျလာမှုမြားကွောငျ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားအနဖွေငျ့ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျနှငျ့ ကြောကျတျောမွို့နယျအတှငျး လုံခွုံရေးလုပျငနျးမြားအား တိုးမွငျ့ဆောငျရှကျခဲ့သညျ။
ယငျးသို့ဆောငျရှကျလကျြရှိစဉျ မတျ ၁ဝ ရကျ၌ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျနှငျ့ ကြောကျတျောမွို့နယျ၊ ကနျဇောကျကြေးရှာ အနီးတဈဝိုကျ ရပျကှကျ၊ကြေးရှာမြား လုံခွုံရေးတပျစခနျးမြားအား AA အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူ အဖှဲ့မြားမှ ထပျမံနှောငျ့ယှကျ တိုကျခိုကျမညျဟု သတငျးရရှိသဖွငျ့
ကြောကျတျောမွို့နယျ အနီးတဈဝိုကျ လုံခွုံရေး ဆောငျရှကျနသေော တပျမတျောစဈကွောငျး နှဈကွောငျးအား ကနျဇောကျနှငျ့ ပုဏ်ဏားကြှနျး အကွားရှပွေ့ောငျး၍ နယျမွစေိုးမိုးရေး ဆောငျရှကျခဲ့သညျ။ အဆိုပါ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ မတျ ၁၁ ရကျနလေ့ညျပိုငျးတှငျ ကြောကျတျောမွို့၊ ကနျဇောကျကြေးရှာ၏ တောငျဘကျ မီတာ ၇ဝဝဝ ခနျ့အကှာသို့ အရောကျ၌
ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျနှငျ့ ကြောကျတျောမွို့နယျတို့အား ဝငျရောကျတိုကျခိုကျ၊ နှောငျ့ယှကျဖကျြဆီးရနျ အငျအားစုစညျးလကျြရှိသော AA အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူအဖှဲ့မှ အငျအားစုမြားနှငျ့ နယျမွခေံကြေးရှာအလိုကျ ရိုးသားစှာ လုပျကိုငျစားသောကျနကွေသညျ့ အရပျသားမြားအား လကျနကျဖွငျ့ခွိမျးခွောကျ၍ စုစညျးထားသညျ့ အငျအားစုမြားပါ ပူးပေါငျးထားသော ယာယီအခွပွေုစခနျးအား တှရှေိ့ပွီး စတငျထိတှမှေု့ ဖွဈပှားခဲ့ကာ ရငျဆိုငျထိနျးခြုပျခဲ့သညျ။
ထိုသို့ ရငျဆိုငျထိနျးခြုပျလကျြရှိစဉျ AA အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူမြားသညျ မတျ ၁၂ ရကျတှငျ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားအား အငျအားအလုံးအရငျးဖွငျ့ အကွိမျကွိမျ ဝိုငျးပတျပိတျဆို့ တိုကျခိုကျခွငျးမြား ၊ အကွိမျကွိမျအငျအားထပျမံဖွညျ့တငျး၍ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားအား အပွီးသတျခမြှေုနျးနိုငျရေး ဆောငျရှကျခဲ့သညျ။
မတျ ၁၃ ရကျတှငျ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားအား အငျအားဖွညျ့တငျးရနျ သှားရောကျခဲ့သော တပျမတျောစဈကွောငျး တဈကွောငျးကိုလညျး ဖွတျတောကျပိတျဆို့ခဲ့ပွီး လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားအား အပွီးသတျ တိုကျခိုကျခမြှေုနျးနိုငျရေးအတှကျ အကွိမျကွိမျ နညေ့ဝိုငျးပတျ ပိတျဆို့လုံးထှေးတိုကျခိုကျရနျ ဆောငျရှကျလာခဲ့ရာ မိမိတပျမြားက ရှပျရှပျခြှံခြှံပွနျလညျ တိုကျခိုကျခဲ့ရသညျ။
မတျ ၁၃ ရကျ ညပိုငျးနှငျ့ မတျ ၁၄ ရကျတို့တှငျ လုံခွုံရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားက ပဈကူ၊ပဈအားရယူလကျြ မိမိတပျဖှဲ့ဝငျမြားအား ခမြှေုနျးရနျ ကွိုးပမျးလကျြရှိသညျ့ AA အကွမျးဖကျ သောငျးကနျြးသူအဖှဲ့အား ဟနျခကျြညီ ပွငျးထနျစှာ တနျပွနျထိုးစဈဆငျ တိုကျခိုကျခဲ့သညျ။
လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြား၏ ရဲဝံ့စှနျ့စားစှာ ဟနျခကျြညီ တိုကျခိုကျခဲ့မှုမြားကွောငျ့ AA အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူ အဖှဲ့မြားသညျ မတျ ၁၄ ရကျ ညနပေိုငျးတှငျ အကအြဆုံးမြားစှာဖွငျ့ အရပျမကျြနှာအသီးသီးသို့ ဆုတျခှာထှကျပွေး သှားခဲ့သညျ။
ဖွဈစဉျတှငျ မိမိဘကျမှ အရာရှိ၊စဈသညျအခြို့ ကဆြုံးဒဏျရာ ရရှိခဲ့ပွီး AA အကွမျးဖကျသောငျးကနျြးသူမြားထံမှ လကျနကျ၊အလောငျးနှငျ့ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျနှငျ့ ကြောကျတျောမွို့နယျ အတှငျး မွို့၊ ရှာနှငျ့ ဌာနဆိုငျရာ အဆောကျအဦမြားအား တိုကျခိုကျရနျ ရညျရှယျဖှငျ့လှဈထားသညျ့ ယာယီအခွပွေုစခနျး ၁ ခုတို့အား သိမျးပိုကျရရှိခဲ့ပွီးပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျနှငျ့ ကြောကျတျောမွို့နယျ အနီးတဈဝိုကျ လုံခွုံရေးအား ဆကျလကျဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
” အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆေးနည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ရာသီသွေး ဓမ္မတာသွေးလွန်တာတွေကိုရပ်တန့်သွားစေမည့် ဆေးနည်းနှင့် ပြုစုကုသနည်း “
” ကလေးခေါင်းတုံးရိတ်ခြင်း စသည့် လွဲမှားနေသော အယူအဆအမှားမျာကို ကလေးမိဘတိုင်းသိအောင်မျှပေးလိုက်ပါတယ် “
This Month : 42433
This Year : 237831
Total Users : 596855
Total views : 2744635